Diyaarad ay leeyihiin milateriga Turkiga oo lasoo riday iyo Erdogan oo Hanjabay – Somali News
GALMADA IYO RAAXADA
Diyaarad ay leeyihiin milateriga Turkiga oo lasoo riday iyo Erdogan oo Hanjabay
February 11, 2018 suldaan WARARKA 0
Diyaarad nuuca Qumaatiga u kaca ay leeyihiin Milatariga dalka Turkiga ayaa lagu soo riday gobolka Afrin ee dalka Siiriya, waxaana diyaaradan gantaal la helay xoogag katirsan Jabhada Kurdiyiinta.
Labo ruux oo saarnaa diyaarada lasoo riday ayaa la sheegay in ay dhinteen, walina kalama cada in diyaaradan nuuca Qumaatiga u kaca ee lasoo diray ay waday duqeyn ama ay aheyd nuuca xamuulka qaada.
Madaxweynaha dalka Turkiga, Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlay diyaaradan milatari ee ciidankooda looga soo riday gobolka Afrin ayaa ku hanjabay in si daran loo ciqaabi doono kuwii soo riday diyaaradaasi.
Milatariga Turkiga ayaa howlgal isugu jira dhulka iyo cirka kawada gobolka Afrim ee dalka Siiriya, waxa ayna halkaasi kula dagaalamayaan dagaalyahno katirsan kooxda Kurdiyiinta ee dowlada Turkiga u aqoonsan tahay argagaxiso.
Ciidamo katirsan Milatariga Turkiga ayaa lagu dilay dagaalo toos ah iyo qaraxyo tan iyo markii ay howlgal milatari ka bilaabeen gobolka Afrin, waxa ayna Dowlada Turkiga dooneysaa in halkaasi ka sifeyso maleeshiyaad kurdiyiinta katirsan.
(Daawo Sawirro) Raisul wasaare Narendra Modi oo booqasho ku tegay dhulka Falastiin
Xog cusub oo laga helayo shir Nairobi uga furmay Itoobiya & ONLF,Kenya oo ka hadashay(Sawirro)
Xikmado Jaceyl Oo Qiimo Badan
1. Jaceylku waa waxa ugu quruxda badan ee la heysto, waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo 2. […]
Hablaha ninkan sidan u sameeyo ayay ka helaan
Hablaha jacaylka marka ay kuu qaadan oo aad guursanato haddii aad u samayso arimahan soo scda kuma illaawayaan waligaa siilka inaad u leefto carabka aad […]
Hablaha cajirka weyn maxay ka helaan
Naagaha cajirka weyn waxay sidaas oo kale ka weyn yihiin barida ama dabada, raga marka ay arkaan naagaaas miyirka ayaa ka tagaya naagaha buuran oo […]
Dumarka maxay u jecel yihiin hadalka macaan
Dumarka maxay u jecel yihiin hadalka macaan waxaad ogaataa haweenka waxay ka helaan oo aad u soo jiita hadalka macaan sida abaayo waan ku jeclahay […]
Kacsi la’aanta kediska maxaa kuu keeni kara
Kacsi la’aanta kediska maxaa kuu keeni kara Dumarka ama raga aan kacsanin maxaa la dhihi karaa kacsi la’aanta oo keeni karo hadabada hadalkan ka baro […]